Izithombe Zethu Ezithandekayo Ze-3D ku-Facebook - LucidPix
Izithombe Zethu Ezithandekayo Ze-3D ku-Facebook
Akumangazi ukuthi singabalandeli abakhulu bezithombe ze-3D ku-Facebook. Lokho okwake kwabhekwa gimmick, isikhule saba kakhulu. Njengoba sithole kokuthunyelwe kwethu kwemidiya yezenhlalo, nasekubukeni okuthunyelwe kusuka kwabanye abadali be-3D Photo, azijabulisi nje ukubheka futhi zihlanganyele nazo, zenza umsebenzi omuhle kakhulu wokuletha ukuthandwa okuningi, ukuphawula nokulandelayo kunoku isithombe esijwayelekile.
Mhlawumbe enye yezici zethu esizithandayo zezithombe ze-3D ukuthi basebenza ezimeni eziningi ezahlukene. Akukhawulelwe ama-selfies noma izithombe zokudla okumnandi; lezi zithombe ezithuthukiswe ngokujulile zilungele amahlaya, ubuciko obuhle, ukutholakala komhlaba, izithombe zezilwane, imemori, kanye nezinye izifundo eziningi. Zikhona emhlabeni jikelele emandleni azo okuguqula into ejwayelekile ibe yinto eyinqayizivele.
Kulabo kini on mobile, qiniseka ukuvula izikhala ze-Facebook kuhlelo lokusebenza lwe-Facebook ukuze ubabone enkazimulweni yabo ye-3D!
Okwabakho kukhomputha yakho yedeskithophu noma ye-laptop, ungavele uhambise igundane lakho lapho uhambahamba phezulu kwesithombe ukubona umphumela we-3D. Kodwa-ke, ukubuka lezi zithombe ezigcwele ze-3D kubenza babe ngcono kakhulu. Ukuze wenze njalo, chofoza ngosuku / isikhathi esingezansi kwegama lomlobi bese uchofoza ku-3D Photo ukuyenza igcwele.
Photo oyithandayo ye-3D # 1: Ugogo Knitting
Siyasithanda lesi sithombe se-3D ngezizathu eziningi; okokuqala ukuthi iyahlekisa kakhulu. Sonke singakhuluma ngokuthanda ukupheka kukagogo, kanye nobuhlakani bakhe bokudlala umdlalo wokugoba kwikhonsoli yakhe. Okokugcina, sithanda ukuthi into eyenziwe ukuthi ibe yi-2D ingaguqulela ku-3D kahle kakhulu.
Photo oyithandayo ye-3D # 2: Amehlo enja kaPuppy
Akukho lutho olufana nokuthi imidlwane ebukwayo ingakunika yona uma ifuna okuthile. Inhlanganisela yamehlo abo amakhulu, izindlebe ze-Floppy, futhi hhayi-lapho-nokho-ke ukubambisana kwanele ukwenza ngisho nenhliziyo ebanda kakhulu incibilike ithi, "awwww!" Lezi zibukeka zingcono kakhulu ku-3D, lapho iso likulandela khona, noma ngabe uyaphi ikhanda lakho. Wake wazibuza ukuthi kungani sithola lezi zingane zinqabile? Mhlawumbe kungenxa yokuthi bavela baba muhle ngakho-ke abantu babezobathatha babenze ingxenye yomndeni wethu.
Izithombe Ezintandokazi ze-3D # 3: Ugwadule ILanga
Ayikho into efana nelanga elihle. Abanye bacabanga uthando lwethu lwangaphakathi lokushona kwelanga oluhle luhambisana nesisho sakudala esithi, “Red Sky At Night, Sailor's Delight, Red Sky Morning, Sailors That Warning,” ngoba ukushona kwelanga obomvu kuvame ukubikezela isimo sezulu esihle ngosuku olulandelayo . Noma ngabe yisiphi isizathu, siyasithanda lesi sithombe esithathwe I-Arpan Das. Uma iguqulwa ibe yi-3D, kuyasiza ngempela “ukukuletha lapho,” kukusiza uzizwe sengathi uyazibonela ngokwakho ukuthi lelo langa selishonile.
Izithombe Ezintandokazi ze-3D # 4: Imibala Ngemuva Kwemvula
Ubuciko obuhle kubukeka njengento ekhethekile ye-LucidPix 3D Photo Conversion. Njengoba ubuciko bungalandeli imithetho yezwe yangempela ngaso sonke isikhathi, awusoze wazi ukuthi uzothola ini uma usebenza ucezu lobuciko ngethuluzi lethu lokuguqula. Injini ye-AI esiyidalile ukunquma ukujula kwezithombe, ngaphandle kokusebenzisa imodi yokubonisa isithombe noma amakhamera amabili, isebenzisa ukufunda kwangempela komhlaba. Uma unikezwe izigcawu ezinjengalezi ezingenhla, ubuhlakani bokufakelwa obukhona ngaphakathi kweLucidPix buletha umdwebo empilweni, kukusize ngena kulokhu yenza umhlaba ukholwe, njengoMary Poppins noBert bakwenza ku-movie yakhe yokuzibiza ngegama.
Photo oyithandayo ye-3D # 5: Ngubani odinga Izandla?
Masingakhohlwa ngemidwebo! Izithombe ze-Facebook 3D ziyindlela enhle yokuthatha isithombe sakho esilandelayo kwelinye izinga. Thatha, ngokwesibonelo, lesi sithombe sentokazi esime ezandleni zayo sihlose umnsalo nomcibisholo. Ku-2D, isithombe esihle, esikufanele ukubuka ngokushesha, kepha akukho okunye. Uma iguqulwa ibe yi-3D, kuthatha impilo entsha. Uyazi ushukumise ifoni noma igundane lakho ukusiza inhloso yakhe!
Izithombe Ezintandokazi ze-3D # 6: I-Seurat's ISonto eLa Grande Jatte
Ukuguqulwa okuhle kwe- #D akugcini ekupendweni okubonakalayo. Umdwebo we-Seurat's pointillist, yenziwe ngezigidi zamachashazi amancane, ubukeka ungcono ngokwedlula umkhawulo wesithathu. Mhlawumbe ingxenye yethu esiyithandayo yalomdwebo, ngaphandle kwezimfanelo zakhe siqu esimangazayo, yilesi sigameko esivela kuFerris Bueller's Day Off lapho uCameron evala amehlo khona nale ntombazanyana emupendweni.
Le movie ikhetheke kangaka. Uma ungakayiboni, ngiyincoma kakhulu.
Izithombe Ezintandokazi ze-3D # 7: Idolobha Elidala laseDubrovnik
Enye yezinto ezinhle kakhulu ze-Facebook 3D Photos yikhono labo lokuletha isehlakalo empilweni. Esikhundleni sokubheka nje lesi sehlakalo njengoba umthwebuli zithombe wasibona, lezi zithombe ezithuthukiswa kukusiza ngempela uzizwe sengathi uzibonela lesi sehlakalo. Umuzwa "wokuba lapho" ungaqina kakhulu, sibheka ezinye izithombe ze-3D ezinamandla I-Telepresence.
Photo oyithandayo ye-3D # 8: Memes
Njengoba wonke umuntu azi, ama-memes asuke ku-niche aye ku-a mkhuba womhlaba wonke. Wonke umuntu, kusuka ku-Joes ngokwesilinganiso, kuya kosaziwayo abaphezulu emhlabeni basebenzisa ama-memes nsuku zonke, futhi iLucidPix ayigcineki kulo mkhuba. Kumfanekiso ongenhla, sasisebenzisa UDolly Parton inselelo yesithombe sephrofayili meme futhi ikhombisile ukuthi yini eyenza iLucidPix ihluke kwabanye.
Izithombe Ezithandekayo # 9: INdlu Yasemanzini KaFrank Lloyd Wright
UFrank Lloyd Wright, ovame ukubheka njengomunye wabakhi bezakhiwo ezinhle kakhulu eMelika, abakholelwa kukho ukuklama izakhiwo ezazivumelana nobuntu nemvelo yakhona. Le nkolelo mhlawumbe icaciswe kahle kakhulu kwindalo yakhe ebizwa ngokuthi yiFallingwater. Leli khaya, elisehlathini lamaBear Run, ePennsylvania, lalethela ngaphandle ngaphakathi ngaphakathi ngesihlahla esigcwele sigcwele sihlanganiswa egumbini lokudlela nasegumbini lokuhlala, nomfudlana ogeleza yize indlu. Kafushane ngokuvakashela ekhaya uqobo, esikuncomela ukuthi ungeze ohlwini lwakho lwamabhakede, ukulibuka ku-3D kwenza umsebenzi omuhle wokukusiza ukuzwa ikhaya uqobo.
Photo oyithandayo ye-3D # 10: Yini i-Dinner?
KuLucidPix, singabalandeli abakhulu bezithombe zokudla. Siyakuqonda lokho Ukudla okubukeka kukuhle kunambitheka kangcono. Ukuthi uyisigaxa soshizi se-pizza noma i umqulu weqanda owakhiwe, ukuthatha nokwabelana ngezithombe zakho zokudla ku-3D kubenza bajabule ngokwengeziwe.
Umehluko phakathi kwesithombe esijwayelekile se-2D nesithombe se-3D →← Ungasibhala Kanjani isithombe se-3D
Ungayakha Kanjani i-GIF Nge-LucidPix